थोक कारोबार गर्ने ४ लघुवित्तको कस्तो छ अवस्था, कसरी गर्दैछन् व्यापार ?
काठमाडौं : थोक कर्जा कारोबार गर्ने ४ लघुवित्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत थोक कर्जा कारोबार गर्ने ४ लघुवित्त संस्थामा साना किसान, आरएमडीसी, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स र आरएसडीसी लघुवित्त रहेका छन् । यी मध्ये सबैभन्दा अब्बल साना किसान लघुवित्त रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा जान प्रोत्साहन गरेको छ ।
यसैबीच थोक तथा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजीका हिसाबले लघुवित्तहरुलाई ३ वर्गमा बाँडेको छ । राष्ट्रियस्तरको हुन कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिन्छ भने प्रदेशस्तरीय हुन २ करोड पुँजी चाहिन्छ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चुक्ता पुँजी साना किसानको सबैभन्दा धेरै
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासम्म आइपुग्दा थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनी मध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी साना किसान लघुवित्तको रहेको छ । यसको चुक्ता पुँजी २५.१२% ले बढेर १ अर्ब २५ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो नै सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी बढ्ने थोक लघुवित्त कम्पनी पनि हो । आरएसडीसी लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ९% ले बढेको छ । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स र आरएमडीसीको चुक्ता पुँजी गत वर्षकै यथावत रहेको छ ।
जगेडा कोषमा पनि साना किसान लघुवित्त नै अघि
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष साना किसान लघुवित्तको रहेको छ । यसको जगेडा कोष १७.८३% ले बढेर २ अर्ब ३२ करोड ६२ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा ४ वटै कम्पनीको जगेडा कोष बढेको छ । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढ्नेमा फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स रहेको छ । यसको जगेडा कोष १०२.५२% ले बढेर २८ करोड १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
खुद ब्याज आम्दानीमा पनि साना किसान लघुवित्तकै अग्रता
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी साना किसान लघुवित्तले कमाएको छ । यसको खुद ब्याज आम्दानी ९.०२% ले बढेर १ अर्ब २१ करोड ६९ लाख २७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अरु २ कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी बढेको छ भने आरएमडीसीको खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ । सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी बढ्नेमा फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स रहेको छ । यसको खुद ब्याज आम्दानी १८.१०% ले बढेको छ ।
खुद नाफामा पनि साना किसान नै अगाडि
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै खुद नाफा कमाउनेमा साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था परेको छ । यसको खुद नाफा १२.१८% ले बढेर ६१ करोड ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअवधिमा आरएमडीसीको खुद नाफा घटेको छ भने अरुको बढेको छ । सबैभन्दा धेरै खुद नाफा बढ्नेमा आरएसडीसी लघुवित्त रहेको छ । यसको खुद नाफा १५.४६% ले बढेर ९ करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी साना किसान लघुवित्तको
असार मसान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी साना किसान लघुवित्त रहेको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ४९ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । यसअवधिमा ३ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ भने आरएसडीसी लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी मात्रै बढेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था कति प्रकारका छन् र के काम गर्दछन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा कारोबारको आधारमा थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने र खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी २ प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मात्र विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाई कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन ।
साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाएर तिनीहरूबाट नियमित रुपमा बचत संकलन गर्छन् । यसरी संकलित रकम तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विपन्न वर्ग शीर्षकमा सापटी लिएर आफ्ना सदस्यहरूलाई सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । जस अनुसार कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिनाधितो लघु कर्जा दिइन्छ । यसैगरी, स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालनका लागि धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य गर्दछन् ।